Kedu ihe bụ Network Protocol Time (NTP)? | Ntuzi zuru oke
8 Ka 2017
Usoro Nhazi Oge Network (NTP)
Gịnị bụ Usoro Nhazi Oge Network (NTP)?N'ezie, ọ bụ usoro netwọk eji ejikọta clocks n'etiti usoro mpempe akwụkwọ na-eme ka netwọk gbanwee. Ọ nọwo ebe ọ bụ na etiti 1980s nke Devid Mills kere na Mahadum Delaware; ọ bụ otu n'ime usoro iwu kachasị mma nke dị na Internet. NTP kwadoro mmekọrịta mmekọrịta oge ndị ọzọ innovations nke na-enweghị ikike ole na ole iji gbanwee oge na-ele ebe nke oge ma ọ bụ ihe nkesa oge site na ndị na-erite uru ma ọ bụ na-eme ka ọtụtụ nkwụsịtụ dị na ọsọ nke netwọk ozi igwe.
NTP enweela mgbanwe dị iche iche ebe ọ bụ mmeghe nke 30 afọ gara aga. Ejiri 0 mee ihe NTP na RFC 958 na September nke 1985. NTPv0 nwere ike ịrụpụta oge zuru oke na ọtụtụ milliseconds. Na 1988, RFC 1059 ji NTPv1, nke e ji nụgharịrị NTP maka ihe nkesa ndị ahịa na òkè dị iche. Na 1989, RFC 1119 ji NTPv2, nke gụnyere ihe dịka usoro njikwa na atụmatụ ntọala, nke a ka ejizi dịka akụkụ nke taa dị iche iche. RFC 1305, nke weputara na 1992, kpo NTPv3. NTPv3 gụnyere ihe nchọpụta na nyocha nke na-enyere ndị ahịa aka ịmata ihe dị iche iche. Ụdị ọnọdụ nkwurịta okwu na-ejikwa enyemaka nyere aka na-ewepụta oge na otutu na-enweta netwọk. Na 2010, e kesara RFC 5905 na nkọwa maka NTPv4 ka RFC 7822 kwalitere na March nke 2016. NTPv4 bụ ugbu a ngbanwe nke NTP. Ọ na-eme ka ọtụtụ ihe yiri nke NTPv3 na-agụnye ịkwado maka IPv6 dị ka ihe nkwekọrịta netwọk bụ isi. A na-eme ka nkwenye dị mma karị ma na-enye usoro nchebe ahụ kachasị mma.
NTP jiri usoro dị iche iche nke isi oge. A maara ọkwa ọ bụla nke ọganihu usoro a dị ka atụmatụ ma na-emepụta ihe dị mkpa nke na-amalite na efu (0). Ka ị na-agụnye oge, isi mmalite na mekọrịta na isi iyi dị elu na stratum (weta ya na njirimara dị mkpirikpi), ị tinye 1 ka ọ kwadoro ya. Anyị nwere ike iji usoro nkwanye ùgwù dị ka ndabere nke ntụkwasị obi nke oge isi. Zero bụ onye a pụrụ ịdabere na ya, 15 bụ opekempe kachasị dịtụ ala ma n'otu oge ahụ a na-arụ ọrụ. Akwukwo nke 16 abughi nke anaghi achota ya ma kwuo na ya adighi. Ngwá ngwongwo 16 dị larịị abụghị usoro isi oge. NTP na-eziga oge oge na-achịkwa oge zuru ụwa ọnụ (nke a na-akpọ Oge Eluigwe na Ala ma ọ bụ UTC). Mgbanwe maka oge obi kwesịrị ikwe omume na ihe nkesa dị nso ma ọ bụ na ngwaọrụ ndị ahịa.
Ntọala nlele nke NTP maka ịzụ ahịa bụ isi oge site na isi iyi egwu, dịka ọmụmaatụ, isi oge nchịkwa. Na United States, National Institute of Standards and Technology nwere sava oge anyị nwere ike ịmekọrịta. Na tf.nist.gov/tf-cgi/servers.cgi, ị nwere ike ịchọpụta ọtụtụ ndị sava oge, ebe ha na ọnọdụ IP na-egosi nhazi oge. Mgbe ị na-ewepụta oge gaa na ihe nkesa na oge nkesa ma na-abawanyewanye, ị nwere ike jiri ya mee ihe dị ka isi oge n'ime ọrụ netwọk. Ndị na-agbanwe ma gbanwee (Cisco na ndị ọzọ) nwere ike wepụta oge site na ihe nkesa gị dị nso, na mgbe nke ahụ gasịrị, ha nwere ike ịkwaga ịghọ isi oge site na ngwaọrụ gafere ha. Imirikiti usoro ọrụ ga-eme ka NTP gụnye Windows. Ihe di iche nke Windows ebe Windows 2000 nwere Windows Time Service (W32Time) iji megharia oge tinye NTP.
Na netwọk taa, enwere ike imekọrịta oge n'ime milliseconds ma ọ bụ ọtụtụ millizconds, ma gịnị mere? Nke ahụ na-adabere! Ọ na-adabere na ngwa ndị e tinyere na ihe ha chọrọ maka oge. O nwere ike ịbụ na ịnwe elekere "ezi uche" nwere ike ịbụ ihe zuru oke ịmara mgbe e mere email ma tinyekwa ya ọzọ. Oge stampụ na ikike ndị bụ isi nke dị n'ime 10s nke milliseconds nwere ike ezuru. Ngwa ndị ahụ nwere ike ịbụ nnukwu oge ọzọ. Site na nchọpụta nyocha, inwe stampụ oge n'ime milliseconds nwere ike inye aka ikpebi nsogbu n'ime netwọk ahụ. Tụlee ngwa ndị bara uru. Inwe ihe karịrị otu hotspot elekere anya maka ijikwa akaụntụ ma ọ bụ mgbanwe mmefu ego ọzọ bụ ihe a na-atụghị anya ya. Otu n'ime ngwa ndị kachasị mkpa iji nweta NTP bụ maka ikike nke ụgbọelu, dịka onye ahịa oge niile, enwere m obi ụtọ ịmara na ngwaahịa na akụrụngwa na-agbanye ụgbọ elu anyị nwere ihe ziri ezi n'ime milliseconds. Nke a na-enye ndị na-egwu ụgbọ elu ahụ ohere inwe echiche dị nnọọ mma banyere mpaghara nke ụgbọelu na nso nso ndị ọzọ.
NTP bụ usoro nkwekọrịta nke nọworo na gburugburu 30 afọ ma ka na-egbo mkpa. Ọ gbanwere ka ọ bụrụ ndị na-enweghị ihe mgbaru ọsọ, anyị na-adaberekwa na oge. Na NTP taa, anyị nwere ike ịnweta karịa oge ezi uche dị na ya ma nweta nkenke nke ọkwa ọkwa igwe. Na ohere na ịchọrọ ihe karịrị nke ahụ, lee anya na oge nkwekọrịta (PTP) ... ma nke ahụ bụ maka ọkwa ọzọ.
Ihe ngosi ihe omuma nke 5
Gịnị mere gị WiFi akpa na Olee otú iji dozie ya?